चितवन काण्ड र इण्डोप्यासीफिक घुसपैठीया ! - Dainik Nepal
-सिद्धिचरण भट्टराई २०७६ असोज १३ गते १५:२०
मलाई अचेल के लाग्न थालेको छ भने हाम्रो युवा संगठनमा नै दरवारीया, सिआईए र रअका घुसपैठिया पसेका छन । यीनीहरु नेकपा(नेकपा)का केन्द्रिय अध्यक्ष र लोकप्रिय नेताहरुलाई बदनामा गराउन उनीहरुकै पक्षमा काम गरेजस्तो गरेर मण्डलेवाद स्थापित गर्न लाग्दैछन र व्यवस्थाप्रति नै मानिसको वितृष्णा बढाउन लाग्दैछन् ।
कारण हुन् : रवि लामिछाने काण्डको हनुमानगिरी विरोध, ज्ञानेन्द्र शाहीलाई जिल्ला प्रवेश निषेध र चितवनमा आक्रमण ।
लक्ष्यमा सि जिन पिङ भ्रमण
म के कुरा शसंकित छु भने नेपाल भारत र चीनको शक्ति संघर्षको चेपुवामा छ, अर्को भर्खरै चीनविरुद्ध इण्डोप्यासिफिक रणनीतिबारे भयंकर बहस शुरु हुनु पूर्वनेपालमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङको भ्रमणको तयारी हुँदैछ ।
पश्चिमा गुप्तचरहरु नेपालमा ठूलै भाँडभैलो होस् र चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण रोकियोस् भन्ने चाहिरहेका छन् । केही शंकास्पद व्यक्तिहरुलाई भ्रष्टाचार, महंगीकाविरुद्ध सडक जनमत बनाउन परिचालित गरिएका हुन सक्छन् ।
ठीक यही बेलामा बघिनीको आक्रमण र चिथोर्ने तरिकाहरु नेताहरुबाट आएका छन्, नभन्दै कथित नेपालका लागि नेपाली नामक अभियानका अभियन्ता ठानिएका ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि सांघातिक आक्रमण भएको छ । यो के सि भ्रमण लक्षित त हैन ? त्यही इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको एक खुफिया हिस्सा त हैन ? मलाई लाग्छ ः ज्ञानेन्द्रको लक्ष्य र उनलाई आक्रमण गर्नेहरुको लक्ष्य सि जिन पिङ भ्रमण असफल बनाउन मलजल गर्नु हो । यसबाट ओली सरकारलाई अरु असफल बनाउने प्रयत्न नै हो ।
युवा संगठन नै वैैचारिक छैन
युवा संगठनका नेताहरुको स्तर हामीले हेरेका छौं राजनीतिक वैचारिक प्रशिक्षण नभएको लामो समय भयो । प्रशिक्षण भनेका सिमित औपचारिकता लागि मात्र बनेका छन् ।
राजनीतिक विश्वव्यापी सम्बन्धले आन्तरिक राजनीतिमा पार्ने प्रभावका बारेमा हामीले गम्भीर रुपले आजका युवालाई सिकाएका छैनौँ । युवा कमिटीमा आउँदा सजिलै आएपनि युवा संघहरुलाई राजनीतिक विचारले लैस बनाउने प्रयत्न अत्यन्त टिठलाग्दो हुँदा जुनुसुकै बाटोबाट घुसपैठियाहरु छिर्ने र आन्दोलन बदनाम गर्ने सम्भावना रहन्छ ।
आज गुटको हित प्रधान र समग्र पार्टीहित गौण हुँदा जस्तोसुकै पृष्ठभूमिको युवा पनि योजनावद्ध रुपमा घुस्न सक्छ । क्रान्तिकारी पार्टीमा बुर्जवा र प्रतिक्रियावादी र पुरातनपन्थी पार्टीकै नेता रहेछ भनेपनि आज पसेर भोलि जुनसुकै तहको टिकट पाएको हामीले बिर्सिसकेका छैनौँ । यसरी हामीलाई छिन्नभिन्न पार्न, कमजोर बनाउन ओली लोकप्रिय हुँदा ओलीकै कनसुत्ली गर्दै उनकै मान्छे भएर घुसपैठिया छिरेको छ ।
आलोचना र आत्मालोचना गर्ने कम्युनिष्ट र समाजवादी शैलि कमजोर भएपछि गुणगान गाउनेहरु मात्र प्रिय लाग्ने भए नै । प्रिय हनुमानहरु जमातलाई पार्टी र समर्थक ठानिने संस्कार नेतृत्वमै हुर्कदै जाने भैहाल्यो ।
आलोचनात्मक चेत भएकाहरु अराजक, पार्टी बाहिर मात्र बोल्ने भित्र नबोल्ने भैहाले । भित्र पार्टीका प्रशिक्षण एकोहोरो नेताको भाषणमा सिमित हुने र जनता र कार्यकर्ताबाट आउने विचारहरुबारे ध्यान नै नदिने स्वयंपाके रोग हाम्रो आन्दोलनमा सल्किएको १५ बर्ष भन्दा बढि भयो । यो रोगले गुट झांगियो, पार्टी प्रणाली मर्दै र हराउँदै गएको छ । सचेत र तार्किक कार्यकर्ता भन्दा हनुमन्तेहरुको जमात बलियो छ । हनुमन्तेको नाउँमा आलोचकहरुमाथि हिंसात्मक आक्रमणमै उत्रेर लोकतन्त्रकै हुर्मत लिन तम्सिएका छन् ।
ज्ञानेन्द्रशाही माथि चितवनमा भएको आक्रमण यसैको उदाहरण हो ।
सत्ता समर्थकबाटै संविधानको ठाडो उल्लंघन
संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्यको उल्लेख गर्दै भनिएको छ – स्वतन्त्रताको हक अन्तरगत प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको हक हुनेछ, विना हात हतियार भेला हुने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनैपनि भागमा आवत जावत गर्ने स्वतन्त्रता, संघसंस्था र दल खोल्ने स्वतन्त्रता हुने उल्लेख छ । शाहीले यही अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारका गतिविधी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसेकेकोमा विरोध गर्दै हिँडेका छन् ।
सरकारको विरोध गरेको विरोधमा भौतिक आक्रमण भएको छ । यो लोकतन्त्रका लागि र नागरिक स्वतन्त्रताका लागि लडेको गौरवशाली पार्टीप्रति आस्थावान् कुनै पनि क्याडर कार्यक्रमस्थलतर्फ जाँदै गरेको एउटा नागरिक माथि त्यसरी आदर्शच्युत भएर भौतिक आक्रमणमा उत्रन सक्दैन ।
म स्वयं संविधान सभाका लागि लडेको छु, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि जेल गएको छु, कलम चलाईरहेको छु । हिजो सारा नागरिक समाजलाई यो मुद्धामा एक मत भूमिका बनाउन खेलेको छु । यो व्यवस्थाका पक्षमा लडेको हुनाले यसको रक्षाका लागि म लड्छु र लडिरहनेछु । तर, कुनै वैचारिक हिसाबले हामीले बनाएको संविधानको परिधिभित्र रहेर विचार प्रवाह गर्छ भने उसको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने कुनैपनि कुराको विरुद्धमा उभिनु हिजो त्यही स्वतन्त्रताका लागि लड्ने योद्याहरुको पनि कर्तव्य हो ।
यो कर्तव्यबोध गर्नेहरुले मात्र यो व्यवस्था बचाउन सक्छन् । उग्र उद्दण्ड समर्थकका नाममा भएका गतिविधी हामी भर्खर स्थापित् गर्न लागेको व्यवस्थाकै विरुद्ध प्रयोग हुने निश्चित छ । यसले फाईदा प्रतिक्रियावादीहरुलाई हुन्छ, अग्रगामीहरुलाई हुँदैन ।
ओलीलाई अलोकप्रिय विरोधीहरुले गराएको होइन, उनकै समर्थकका नाममा भएका गतिविधीले गराएका हुन् । सही धरातलमा हुँदा ओलीका विरोधीहरुको विरोधले त उनलाई लोकप्रिय नै हुने बनाएको थियो । प्रचण्ड र योगेशको लोकप्रियता समाप्त पार्न उनकै समर्थकहरुका नाममा अराजनीतिक गतिविधि फैलाएर जनताले आशा गरेका नेताहरुको व्यक्तित्वलाई निराशामा बदल्ने योजनाबद्ध काम हुँदैछ । यी झुटा सममर्थकहरुले नौटंकीमाथि आदर्शवान् नेताहरुले दृष्टि पुर्याउन मेरो अनुरोध छ । सँगसँगै यी आन्दोलन चर्कदै गएर सि जिंग पिङको सम्भावित भ्रमण प्रभावित गर्ने गुह्य रणनीतिको पनि नेताहरुले भेउ पाउँदा राम्रै हुन्छ ।
म ज्ञानेन्द्रलाई समर्थन गर्दिनँ तर, उनले उठाएका भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान सामाजिक चरित्रको बनोस् भन्ने म चाहन्छु, उनका अभिव्यक्तिशैली मलाई मन पर्दैनन् । तर, मन नपर्दैमा उनले संविधानतः पाउने हकको उपभोगबाट उनलाई बञ्चित गर्ने तरिकाको समर्थक हुन म सक्दिनँ ।
युवा आन्दोलनको विकृति तल सम्म झांगिएको छ । नेकपा युवा संघका नाममा कब्जाकारी ठेकेदारी, विकासका नाममा कमसल र मुनाफाखोर विकासे निर्माण र मुनाफाखोर प्रवृतिमा लिप्त, व्यवसायिक गुणको अभिवृद्धि होइन ठेक्का पट्टा नदिए पार्टी नै छाड्ने धम्कि, खोला नाला गिट्टी बालुवामा चरम दोहन, जनप्रतिनीधिलाई दिएको भोट गलत तरिकाले आर्थिक लाभलिन बाध्य पार्ने प्रवृतिसँग गासिँदै गएको छ ।
नभुलौं पञ्चायत छिटो ढल्नुमा मण्डलेहरुको भूमिका छ
यसलाई बौद्धिक कुर्तक फैलाएर उत्पादनमा लागेको र लगाइएको भन्दै जनतालाई भ्रमित दिशाहिन बनाइएको छ । काँग्रेसले शुरु गरेको कुप्रथामा व्यवस्थित चिरफार गरी स्पष्ट प्रणाली स्थापित गर्न युवाहरुको भूमिका हुनु पर्नेमा तस्करी, मिलिभगत र मैखाउँ मैलाउँको मनपरी तन्त्रप्रति युवाहरुलाई अभ्यस्त बनाउने काम भएको छ ।
स्थानीय पार्टी यसलाई व्यवस्थित गर्ने मार्गदर्शन गर्न सकेको छैन । यो अवस्थालाई जतिसक्दो व्यवस्थित् गरियोस्, पञ्चायत छिटो ढल्नुमा मण्डलेकाण्डको ठूलो भूमिका छ भन्ने ख्याल गरियोस् ।
(लेखक मदन भण्डारी अध्ययन केन्द्र रुपन्देहीका अध्यक्ष हुन्)